जागरण मिडिया सेन्टर,काठमाण्डौं ।
१, गोर्खापत्र दैनिकमा सभासदको काम ताली वजाउनु शिर्षकमा एक समाचार छापएिको छ ।
संविधानसभामा आफुहरुको काम ताली वजाउने मात्र भएको सभासदहरुले गुनासो गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभासद खड्क वहादुर वस्यालले सभासदले ताली वजाउने वाहेक अरु काम नभएको बताउनुभयो । दलका नेतृत्वले सहमती गर्लान् भनेर कुरेर बस्यौं अहिलेसम्म सहमती हुन सकेन, अहिले पनि अधिकाँश सभासद अलमलको अवस्थामा छौं, उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा एमालेकी सभासद टेकु नेपालीले विगतको संविधानसभाका उपलव्धिको रक्ष ागर्न पनि मुस्किल हुने अवस्था आएको बताउनुभयो । दलित गैरसरकारी संस्था महासँघका अध्यक्ष गजाधर सुनारले ४१ जना दलित सभासद संविधानसभाभित्रै लड्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
जागरण मिडिया सेन्टर र सामरी उत्थान सेवाद्धारा विहिवार आयोजित अन्तरक्रियामा समता फाउण्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले दलित दलितबीच हुने विवादका कारणले अन्य समुदायले अवसर पाउन सक्ने भएकाले दलित आन्दोलनको एकता र सहकार्यमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल उत्पिडित जातिय मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विकेले संविधानमा दलित अधिकार के हुने भन्ने कुरा अन्यौलमै रहेको दावीगर्नुभयो ।
२, दलितसँग विवाह गर्दा कुटपिट गर्ने पक्राउ शिर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले नुवाकोटको समाचार छापेको छ ।
दलित युवकसँग विवाह गरेको निहुँमा युवतीलाई कुटपिट गर्ने माईती पक्षका पाँचजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । चारघरे ८ पिपलडाँडाकी २० वर्षिया रजनी थापामगरलाई कुटपिट गर्ने उनका काका सहित पाँचजना पक्राउ परेका हुन् ।
कल्याणपुर४ खुर्सानीका २१ वर्षिय लालवहादुर विकसँग गत शनिवार प्रेम विवाह गरेपछि माईती पक्षले सोमवार दिउसो केटाकै घरमा पुगेर रजनीलाई कुटपिट गरेका थिए । कुटपिट पछि रजनीले चारघरे ८ का नाताले काका पर्ने हिक्मत वहादुर थापामगर, मञ्जु राना मगर, रमाकुमारी थापा मगर, र होम वहादुर थापामगर विरुद्ध प्रहरीमा उजरी दिएकी थिईन् । अहिले उजुरीमा उल्लेखित ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने, साईली राना मगर भने फरार रहेको प्रहरी निरीक्षक प्रद्युम्न अधिकारीले जनाएका छन् । रजनीलाई माईती गाँउका ४०÷५० जनाले घेरेर ६ जनाले कुटपिट गरेका थिए । पक्राउ परेकालाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ अनुसार कारवाही गरिने प्रहरी निरीक्षक अधिकारीले बताए । कुटसिपटबाट घाईती भएकी रजनीको जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमा उपचार भईरहेको छ । उपचारपछि पनि उनी राम्रोसँग हिडडुल गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको परिवारले जनाएको छ । उनका पति लालवहादुर विकले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेपछि पनि असुरक्षित महसुस गरेकाले घर फर्कन सकेका छैनन् । उनीहरु सदरमुकामै वस्दै आएका छन् ।
३, तीनसय कम्बल वितरण शिर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा सप्तरीको एक अर्काे समाचार रहेको छ ।
शीतलहर पिडितका लागि नयाँ पत्रिकाले सञ्चालन गरेको न्यानो वाँडौ अभियान अन्तगृत सप्तरीका तीन सय मुसहर र डोम तथा विपन्न परिवारलाई कम्वल वितरण गरिएको छ । सप्तरीको ५० विपन्न परिवारलाई विहीवार कम्वल दिइएको थियो ।
४, दलितका उपलव्धि जोगाउन चुनौती शिर्षकमा एक समाचार हिमालय टाईम्समा पनि छ ।
विभिन्न राजनीतिक दल नेताले दलित समुदायका वारेमा पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त उप्िलव्धि कटौटी हुने खतरा वढ्दै गएको जनाउदै संसद, सडक र पार्टीभित्र तीव्र संघर्ष गर्नुपर्ने जनाएका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरद्धारा विहिवार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रियामा विभिन्न दलका दलित नेताले उत्पिडित समुदायका लागि लड्ने मुल्य ठुला दलले नै माग गर्दै आएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समेत कटौती गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सभासद खड्क वहादुुर वस्यालले संविधानका विवादित विषयलाई लिएर सभासद प्रश्नावली सहित जनताका जाँदा दलित नेतालाई प्राप्त उपलव्धिलाई जोगाउन कठिन भएको गुनासो गर्नुभयो । नेकपा एमालेकी नेत्री तथा सभासद टेकु नेपालीले समयमै संविधान जारी हुन नसक्दा सबैभन्दा वढि दलित, महिला, मधेसी र आदीवासी जनजाति लगाएत युगौदेखी उत्पिडनमा पारिएका समुदायलाई घाटा लाग्ने हुँदा जति सक्दो चाँडो संविधान लागि सकरात्मक दबाब सिर्जन ागर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
एमाले निकट मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विकेले विवादित विषयमा तयार गरिने प्रश्नावलीमा दलित समुदायको विषयलाई पनि समावेष गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दासले दलित समुदायले उठाउदै आएको पुर्ण समानुपातिकनिर्वाचन प्रणालीबाट प्रष्ट धारणा राख्न नेतासँग आग्रह गर्नुभयो । दलित गैर सरकारी सस्था महाँसंघका अध्यक्ष गजाधर सुनारले दलित समुदायबाट संविधानसभामा प्रतिनिधीत्व गर्ने ४१ जना सभासदले संसदभित्र तीव्र रुपमा आफ्ना सवाल उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
५, दलितका प्राप्त उपलव्धि जोगाउन जोड शिर्षकमा सोही समाचार कमाण्डर पोष्ट दैनिकमा पनि छापिएको छ ।
६, दलित वस्तीमा पुगेन सभासदको कार्यक्रम शिर्षकमा वारा कलैयाको अर्काे समाचार पनि कमाण्डर पोष्ट दैनिकमा रहेको छ ।
वाराको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ अन्तर्गत पुर्वाधार विशेष तथा निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमले सभासद फर्मुलाह मंसुरले सार्वजनिक गरेको योजनामा कलैया नगरपालकिा र क्षेत्र नं ३का १४ वटा गाविसका दलित वस्तीको विकासका लागि ध्यान जान सकेको छैन । कलैया नगरपालिकाको वडा नम्वर ६ मुसहर टोल, ५ का डोम वस्ति, ९ बरेवाका दलित वस्तीमा मंसुरको वजेटले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । ती वस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था, शिक्षाको प्रकाश नै पुगेको छैन । साथै पानीको निकास र बाटो पनि छैन ।
(थप समाचार कमाण्डर पोष्टकै पेज नम्वर ५मा )
७, त्यसैगरी दलितका एक्ला पण्डितलाई भ्याई नभ्याई शिर्षकमा गुल्मीको एक समाचार पनि कमाण्डर पोष्ट दैनिकमै रहेको छ ।
गुल्मी रेसुङ्गाका नगर पालिका ४ साविकको अर्खले रैदीगाउका कृष्ण सुनार लगाएका ४ दाजुभाईले बावु जुद्ध वहादुर सुनारको चौरासी पुजा गर्ने पण्डित रोजे अर्घाखाँचीका नन्दलाल विश्वकर्मा । लुम्विनी अञ्चल सहितका छिमेकी अञ्चलका जिल्लाहरुमा चर्चित र व्यवस्त पण्डित ५१ वर्षिय नन्दलाल विश्वकर्माले मुस्किलले समय दिएर अर्खलेको रैदेगाँउका व्रम्माण पण्डितले भन्दा धारा प्रवाह प्रवचन गरेर जुद्ध वहादृुरको सुनारको चौरासी पुजा गरिदिएका छन् ।
(थप समाचार कमाण्डर पोष्टको पेज नम्वर ५ मा)
८, कान्तिपुर दैनिकमा मुक्त हलिया पुनस्थापना सुरु शिर्षकमा बाजुराको एक समाचार छापिएको छ ।
बाजुरामा मुक्त हलिया पुनस्थापन प्रक्रिया सुरु गरी ३० घरपरिवारका लागि घर जग्गा खरिद कार्य अघि वढाइएको छ । प्रमाणीकरणमा परेका मध्ये क र ख वर्गका ३० घर परिवारलाई घर जग्गा व्यवस्थ ागर्न नामावली छनौट गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धनप्रसाद शर्मा पौडेलले बताउनु भएको छ । चालु वार्षमा क वर्गबाट छनौट भएका १५ घर परिवारलाई घडेरी किन्न र यी मध्ये ७ का लागि घर बनाउन लागिएको छ । जिल्लामा प्रमाणीकरणमा परेका ९ सय २२ जनाले परिचयपत्र पाईसकेका छन् । क वर्गमा ८० जना परेका छन् ।
(थप समाचार कान्तिपुर दैनिकको पेज नम्वर १५ मा)
By जागरण मिडिया सेन्टर in दलित समाचार, पत्रपत्रिकामा आज on February 6, 2015 .
← ‘दलित’ भन्ने कि ‘शिल्पी’ ?	पदाधिकारी नहुदाँ दलित आयोगमा ठप्प →